Kuwedzera kweApple Pay muCentral America kuchatanga muCosta Rica | IPhone nhau
Apple Bhadhara kuwedzera muCentral America ichatanga muCosta Rica
Kubva payakapihwa uye inotevera musika kuvhurwa mu2014, Apple Pay yakawedzera zvishoma nezvishoma kuenda kune dzimwe nyika, zvisinei, Latin America ndiyo imwe yenzvimbo idzo Apple inoita kunge yakanganwa. Zvirinani kusvika ikozvino, kubvira zvinoenderana nevakomana pa9to5Mac, Apple iri kugadzirira kuwedzera kweApple Pay muCentral America kubva kuCosta Rica.
Zvinoenderana nesvikiro iri, Apple Pay iri kugadzirira kuvhurwa kwayo muCosta Rica nebhangi BAC Credomatic. Kana idzi nhau dzikasimbiswa, Costa Rica ingave iri nyika yechipiri muSpanish inotaura America kuti igamuchire kuita uku mushure meMexico. MuBrazil, Apple Pay yanga ichishanda kubvira iyo yekupedzisira Mitambo yeOlimpiki yakaitwa muna2016.
Nenzira iyi, Costa Rica yaizove iyo Kutanga Central Central Nyika Kugamuchira Apple Bhadhara Rutsigiro, chinhu chinenge chiripo munyika dzinopfuura makumi matanhatu. Sezvineiwo, BAC Credomatic yakatanga kuyedza rutsigiro rweApple Pay kuCosta Rica mavhiki mashoma, rutsigiro ruchazowanikwa kune VISA nevashandisi veMastercard pakutanga.
Kuti uone kana zvirongwa zvebhangi zviri padyo nekutora Apple Pay, iro bhangi rinofanirwa ratidza kuti inoenderana neApple WalletUku kuenderana hakuzopiwi parizvino neiyo yepamutemo BAC Credomatic application, asi iyo inowanikwa kuburikidza neTest Flight.
Kana isu tichifunga nezvekuti BAC Credomatic haisi kungowanikwa muCosta Rica, asi zvakare ine huvepo mune dzimwe nyika senge El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, The Bahamas uye Grand CaymanSezvo kuvhurwa kwacho kuchiitika muCosta Rica, inogona kunge iri nyaya yemazuva Apple Pay isati yasvika kune dzimwe nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Bhadhara kuwedzera muCentral America ichatanga muCosta Rica
Landlord GO bhizinesi simulator ikozvino inoita kuti utenge chivakwa mumaguta
Kutsvaga kwakarasika AirPods kuchave nyore neIOS 15 uye iyo "Tsvaga Yangu" network